Aragti kala fogaanta Doorashada DFS & Musharixiinta. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Aragti kala fogaanta Doorashada DFS & Musharixiinta.
Aragti kala fogaanta Doorashada DFS & Musharixiinta.
Kala qaybsanaanta Dowladda Federaalka & Musharixiinta ku hamineysa in ay isu soo taagaan Xilka Madaxweynaha ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa marka la eego kulamada iska soo horjeeda, tallaabooyinka siyaasadeed & arrimo kale.
Doodda oo duugneed waxa ay xooggeeda soo ifbaxay markii lagu dhawaaqay Doorashada Heer Federaal & Heer Dowlad Goboleed, kadib markii Musharixiintu ay sheegeen in ay ka bar-garteen shaqsiyaad katirsan Nabadsugidda & Madaxtooyada Soomaaliya.
Kulamada Siyaasadeed waa joogto oo waxa ay u muuqdaan in ay isugu jawaabayaan fadhiyada, tallaabooyinka loo qaadayo gaarista Doorashada 20/21 & la kulmidda xubnaha miisaanka ku dhex leh Dowladda iyo caalamka.
Tusaale: Guddiga Doorashada Xukuumadda ay ku xareysay Muqdisho ayaa ku dhawaaqay Guddoon, halka Musharixiinta dhankooda ay soosaareen 28-xubnood oo shalay ku dhawaaqay guddiga ay ugu magac dareen badbaadinta qaranka.
Labo cishe oo keliya ayaa ka dhimman waqtiga loo qorsheeyay in lagu soo gaba-gabeeyo Doorashada Senatarada Aqalka sare BFS, balse ma dhammeystirna Guddigaas, maadaama Madaxweynaha DG Jubbaland uu soo gudbinta xubnaha ku matalaya Doorashada 20/21 shuruud uga dhigay in Gobolka Gedo laga soo qaado Ciidanka DFS.
Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku doodeysa in aysan ku qanci Karin Guddi dhanka Dowladda ka socda & shaqsiyaad barahooda Bulshada ku muujiyay taageeranimada Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Haddaba, kala Aragti fogaanta Guddiga Doorashada ee DFS & Musharixiinta saameyn intee la eg ayay ku leedahay qabsoomidda Doorashada 20/21?
Previous articleMuxuu yahay ujeedka Safarka Abiy Ahmed uu ku tagayo Kenya?
Next articleQofkii u horreeyay oo madow ah oo loo magacaabay Xoghayaha difaaca Mareykanka